शम्भु श्रेष्ठ । देशमा नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दृष्टि साप्ताहिक भूमिगत माले पार्टीको मुखपत्र थियो । विगतदेखि अहिलेसम्म दृष्टिले नेकपाकै विचार, सिद्धान्त बोकेको छ । यसर्थ, दृष्टि मिशन पत्रकारिताबाट अगाडि बढेको एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यम हो । दृष्टिको मिशन ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको यात्रामा समर्पित थियो । तर, अहिले आफ्नै पार्टीको सरकार… विस्तृत समाचार
​जुन जोगी आए पनि...
शम्भु श्रेष्ठ । देशकै दुर्भाग्य भन्नु पर्ला, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वच्छ छवि र निष्कलंक भेट्टाउन मुस्किल भयो । गोपाल पराजुलीमाथि पनि अनेकौं आरोप लाग्यो र प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर हिंड्नुपर्ने बाध्यता उनीमाथि आइलाग्यो । त्यसपछि न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ भनेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेका दीपकराज जोशीको हालत पनि हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्कियो जस्तो भयो । जोशीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनेकौं आरोप लगायो र… विस्तृत समाचार
​पश्चिम सेतीको गहिराइ
शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना देखाइरहँदा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्नुको बाहिरी कारण सतहमा आए पनि भित्री कारण भने अर्कै छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल र नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग दश बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यही सहमतिले… विस्तृत समाचार
​राष्ट्रपतिको सकारात्मक कदम
शम्भु श्रेष्ठ । मानिसलाई सकारात्मक कुराले भन्दा नकारात्मक कुराले चाँडो ध्यान तान्छ । अहिले ‘सामाजिक सञ्जाल’ नकारात्मकतातिर बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा होइन । एउटा सकारात्मक सन्देशले धेरैको मन जित्न सकिन्छ भने, नकारात्मक कुराले धेरैको मन मस्तिष्क खल्बलिन सक्छ । त्यसैले मिडियाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । मिडियाको बल भनेकै प्रबुद्ध पाठकको विश्वास हो । त्यो विश्वास जित्न मिडियाकर्मीहरुले एउटा बौद्धिक पाठकको भन्दा… विस्तृत समाचार
​मुुलुकी ऐनसँग किन तर्सने ?
शम्भु श्रेष्ठ । लोकतन्त्रको जग भनेकै कानूनी शासन हो । यदि कानूनबिनाको राज्यको परिकल्पना गर्ने हो भने त्यसलाई जंगलीराज भने पनि हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले एक वर्ष अगाडि तयार पारेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मुलुकी ऐनको अहिले स्वयं नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने, नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छैन । लोकतन्त्रको खोल ओढेर विपी कोइरालाको नाम जपेर ऊ राजनीति गरिरहेको… विस्तृत समाचार
शम्भु श्रेष्ठ । हरेक सचेत नागरिकलाई एक पटक बालुवाटार पुगौं र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर केही कुरा राखौं भन्ने मन लाग्न सक्छ । यस्तो कुरा सोचेर बालुवाटार पुग्ने जो कोही पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि ढुक्क हुन्छन् । किनभने प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो । उनले बोलुका कुरा कानून बन्छ । लागू हुन्छ । नागरिकको यही विश्वास नै लोकतन्त्रको जग हो । यही विश्वासले नै प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा ओलीलाई… विस्तृत समाचार
​न्यायाधीशमाथि नै अन्याय ?
शम्भु श्रेष्ठ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि जोशीले विज्ञप्तिमार्फत आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताएका छन् । जोशीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रबारे सम्बन्धित निकायसँग बुझ्दै नबुझी पूर्वाग्रह राखेर संसदीय समितिले आफूमाथि अन्याय गरेको दाबी गरेका छन् । यदि शैक्षिक योग्यताकै कारण उनको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको हो र जोशीको दाबी सत्य हो भने निश्चितरुपमा उनीमाथि अन्याय… विस्तृत समाचार
​माछा माछा भ्यागुता
शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै भ्रष्टाचारप्रति आक्रामक बनेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना बित्यो । यो पाँच महिनामा ओलीले जुनसुकै मञ्चबाट पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरेरै छाड्ने बचनवद्धता मात्रै व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकार प्रमुखले बोलेको कुरा जुनसुकै देशमा लागू हुन्छ र त्यसलाई कानूनसरह ठानिन्छ । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीले के बोल्दछन्, के गर्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले विश्वास गर्न… विस्तृत समाचार
​डा. केसीलाई बचाउने हो भने
लोकतन्त्रमा जनता नै निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनता जति बलियो भयो, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति पनि त्यत्ति नै बलियो हुँदै जान्छ । यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध वा समर्थन गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । त्यसलाई आत्मसात गर्नु सरकारको उच्च राजनीतिक संस्कार हो । उच्च राजनीतिक संस्कार र चरित्रबिना लोकतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले शासकहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गर्दै गए भने… विस्तृत समाचार
बाँचुन्जेल हो जिन्दगी
परिवर्तनशील दुनियाँमा सधैं बाँचेको को छ र ? बाँचुन्जेल हो जिन्दगी मर्नु त छदै छ । यी कविताका हरफहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द्रागिरीमा वाचन गरेका हुन् । ओलीका यी कविताका हरफ सामाजिक सञ्जालमा पढिरहेका मानिसहरुले यति कमलो कवि मनका ओली डा.गोविन्द केसीको अनसनप्रति किन कठोर भएका होलान् भनेर टिप्पणी गरिरहेका थिए । एकातिर चन्द्रागिरीको चुचुरोमा पुगेर देशका प्रधानमन्त्री ओलीले यी कविताका हरफ पढिरहेका थिए… विस्तृत समाचार